Sony Electronics Inotangisa Nyowedzero Kuwedzeredza kuG Master ™ Yakazara-Yakavakirwa Lens Series ine Lightweight uye Compact 35mm F1.4 G Master ™ | NAB Ratidza Nhau | 2021 NAB Ratidza Media Partner uye Mugadziri weNAB Ratidza LIVE. Broadcast Injiniya Nhau
musha » Content Creation » Sony Electronics Inotangisa Nyowedzero Kuwedzeredzwa kuna G Master ™ Yakazara-Yakavakirwa Lens Series ine Lightweight uye Compact 35mm F1.4 G Master ™
Sony Electronics Inotangisa Nyowedzero Kuwedzeredzwa kuna G Master ™ Yakazara-Yakavakirwa Lens Series ine Lightweight uye Compact 35mm F1.4 G Master ™
Sony Electronics Inc. nhasi yazivisa iyo FE 35mm F1.4 GM (modhi SEL35F14GM) - iyo nyowani yekuwedzera kune yayo inozivikanwa G Master yakazara-furemu lens dzakateedzana- kuendesa yekutanga-kirasi mhando yemhando uye yakanaka bokeh mune compact uye yakapepuka dhizaini. Kana wabatanidzwa neE-mount kamera muviri, iyo lenzi inopa Sony's indasitiri-inotungamira AF (autofocus) kugona - kwakanakira kwakasiyana siyana kwekushandisa senge kupfura nharaunda, mifananidzo uye mafoto emumigwagwa, kune ese ari matatu uye vhidhiyo.
"At Sony, chinangwa chedu ndechekuzadza nyika nemanzwiro kuburikidza nesimba rekugadzira uye tekinoroji saka takagadzira iyo FE 35mm F1.4 GM kuti inyatso kubata nguva dzinoda kuchengetedzwa zvachose, "akadaro Neal Manowitz, mutevedzeri wemutungamiriri weImaging Products and Solutions Americas ku Sony Zvemagetsi. "Nekugadziriswa kwakanaka uye nehunyanzvi hwekuisa pfungwa tekinoroji, zvese mudiki, isina kureruka dhizaini, iyi lens yakakosha isingakanganise kunaka kwemufananidzo."
Kugadziriswa Kwakasarudzika Mune Yakaomarara Lens
Sony's advanced optical design uye yekugadzira tekinoroji inounza kusarudzika kusarudzika, yakanaka bokeh, uye yakanyatso tarisa kuita kune compact compact inokodzera zvakanaka muchanza cheruoko rwako, inorema chete 18.5 ounces (524 gramu) uye kuyera 3 inches dia. x 3 ⅞ inches (76 mm dia. x 96 mm) ine firita dhayamita ye Φ67mm. Iyo FE 35mm F1.4 GM inoratidzira yemhando yepamusoro tekinoroji iyo inoburitsa inoshamisa musiyano uye wakanaka chisarudzo. Maviri XA (akanyanyisa aspherical) zvinhu zvinonyatso chengetedza kugadziriswa kwakanakisa munzvimbo yese yemufananidzo. Kutenda kune ED girazi chinhu uye kumwe kugadziridzwa kwemaziso, iyo nyowani FE 35mm F1.4 GM inoita mushe mukuvhenekesa kwakaoma nekudzvinyirira zvinobudirira chromatic aberration uye yepepuru fringing yemhedzisiro mhedzisiro.
Iyo FE 35mm F1.4 GM inosvitsa iyo inenge yakatenderera kutenderera nekutenda kune yayo 11-blade kuvakwa - iri isingawanzo nhanho yemhando yekomputa lens. Spherical aberration kutonga pane ese magadzirirwo uye nhanho dzekugadzira dzinopa kune rakanaka bokeh - siginecha hunhu hwe Sony's G Master lens mutsara.
Maviri matsva XA zvinhu zvinopa chinoshamisira padyo-kumusoro neakasviba, inotapira kumashure bokeh. Iko kusanganiswa kweF1.4 yakanyanya kuzarura uye kushanduka kusarudza kwakakwana kupfura daro (mashoma anotarisisa kureba kweanosvika 10.6 inches (27cm) ine hukuru hukuru hwe0.23x mu autofocus mode) inobvumidza yekupedzisira kutonga uye kunoshamisa bokeh kana uchipfura zvese zvasara. uye vhidhiyo.
Yepamberi Funga Nezve Enhanced Mifananidzo
Vaviri ve Sony's XD (yakanyanyisa kusimba) Linear Motors inopa iyo yepamusoro yekusimbisa kudikanwa inodiwa kune chaiyo AF (autofocus) uye kuteedzera - zvichikonzera kwakasarudzika resolution pane chero chinhambwe. State-of-the-art control algorithms, yakagadzirirwa chaizvo iyo XD Linear Motors, inovandudza kudzora mhinduro uye kunyatsoita uchidzikisa kudedera uye ruzha rwekutsanya, kutsetseka uye chinyararire AF kuita.
Kutarisa kwepamberi kunogona zvakare kuzadzikiswa kana kupfura pakakwirira furemu.
Linear Mhinduro MF inovimbisa iyo yekutarisa mhete inopindura kune hunyengeri kutonga kana uchitarisa nemaoko uye yakanakira yekusika yekutarisa mhedzisiro kana uchipfura vhidhiyo. Iyo yekutarisa mhete kutenderera inoshandura yakanangana kune inoenderana shanduko mukutarisa, saka kutonga kunonzwa nekukasira uye kunyatso.
Professional Kudzora Uye Kuvimbika
Iyo FE 35mm F1.4 GM inopa izere nehunyanzvi kudzora inosanganisira yekuvhura mhete ine switchable yekumira mabhatani, inogadziriswa yekutarisa inobata bhatani uye yekutarisa mode switch iyo yese inotsigira kutsetseka, kushanda kwakanaka. Bhatani rekutarisa rinogona kupihwa kumamwe akati wandei mashandiro kuburikidza neyemumuviri menyu menyu, ichipa mukana wakanangana nemabasa akakosha kune vese vafotori nevanyori vevhidhiyo.
Kana yakaiswa kune APS-C kana Super 35 kamera, iyo compact uye isina huremu FE 35mm F1.4 GM inogona kushandiswa seyakajairwa lenzi yakaenzana ne52.5mm yakazara-furemu yakaenzana kona yekuona, ichiita iyo sarudzo yakanaka yekugadzira mavhidhiyo. Mamwe mavhidhiyo mabhenefiti anosanganisira iyo de-inodzvanywa kuvhurika, inokurumidza mitsara AF uye mitsara yekupindura bhuku rinotarisa.
Iyo FE 35mm F1.4 GM inoratidzira guruva uye unyoro husinga gadzike[I] dhizaini uye fluorine pamberi pechinhu chinovhara chinodzosera mvura, oiri uye nezvimwe zvinosvibisa.
Iyo nyowani FE 35mm F1.4 GM ichave ichiwanikwa muna Kukadzi uye ichatengeswa kweinosvika $ 1,399.99 USD uye $ 1,899.99 CAD. Ichatengeswa pamhando dzakasiyana dze SonyVatengesi vane mvumo muNorth America yese.
Nyaya dzekusarudzika uye zvinonakidza zvemukati zvemukati zvakapfurwa neiyo nyowani lens uye Sony'' Zvimwe zvigadzirwa zvekufungidzira zvinogona kuwanikwa pa www.neworleanscitypark.com, saiti yakagadzirirwa kudzidzisa uye kukurudzira vese mafeni uye vatengi ve Sony α - Alpha mhando.
Zvinyorwa zvitsva zvichatumirwa zvakare ku Sony Photo Gallery. Kuti uwane ruzivo rwechigadzirwa, ndapota shanyira:
Vhidhiyo yechigadzirwa pane iyo nyowani FE 35mm F1.4 GM inogona kutariswa HERE.
Sony Electronics inotsigirwa ne Sony Corporation yeAmerica uye mubatanidzwa we Sony Corporation (Japan), imwe yemakambani akazara ezvekuvaraidza munyika, ine portfolio inosanganisira zvemagetsi, mimhanzi, mafirimu, nhare, mitambo, robhoti uye mabasa emari. Dzimbahwe muSan Diego, California, Sony Electronics mutungamiri mune zvemagetsi zvemutengi nemisika yehunyanzvi. Mashandiro anosanganisira kutsvagisa nekusimudzira, mainjiniya, kutengesa, kushambadzira, kugovera uye kushandira vatengi. Sony Zvemagetsi zvinogadzira zvigadzirwa zvinovandudza uye zvinokurudzira zvizvarwa, senge iyo yekuhwina-kuhwina Alpha Inogona Kuchinjana Lens Makamera uye echimurenga epamusoro-resolution zvigadzirwa zveodhiyo. Sony iri zvakare rinotungamira gadzira remagumo-kumagumo mhinduro kubva ku4K yehunyanzvi nhepfenyuro uye A / V michina kune indasitiri inotungamira 4K uye 8K Ultra HD MaTV. Kushanya www.papapen.com mamwe mashoko.
[I] Kwete kuvimbiswa kuve 100% guruva uye isina mvura.
Previous: YeGerman NDR Inobatanidza CGI's StudioDirector 2.0 yeStudio nyowani muHamburg
Zvadaro: Aviteng Joinha Cinegy AŞ Bhizinesi Partner